19OCT-စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT အခြေအနေ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
19OCT-စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT အခြေအနေ
October 19, 2009 — mmweather
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး LUPIT ရဲ့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ ရရှိတဲ့ သတင်းနဲ့ အချက်အလက်များကို တင်ပြပေးသွားပါမယ် –
WUND ရဲ့ ပုံမှာမြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်း စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ LUPIT ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရဲ့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် ၇၈၅ မိုင်ခန့်ကိုရောက်ရှိဗဟိုပြုနေကြောင်း ဒီနေ့နံနက် ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် ၃ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁ နာရီခန့်) မှာ တိုင်းထွာရရှိတဲ့ JTWC ခန့်မှန်းချက် data များအရ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတွင်းမှာ LUPIT ဟာ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၅ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်း (၅.၇၆ မိုင်နှုန်းခန့်) နဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်း၊ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၁၅၅ မိုင် မှ ၁၉ဝ မိုင်နှုန်းအထိရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ LUZON ကျွန်း မြောက်ပိုင်းကို ချဉ်းကပ်လာချိန်မှာ အင်အားအနည်းငယ် လျော့သွားနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း အဲဒီ JTWC data မှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ LUPIT ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေအထိ အဆင့်-၃ (CAT-3 SUPER TYPHOON) အဖြစ်နဲ့ ဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်ဦးမှာဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြထားပြီး လက်ရှိအချိန်မုန်တိုင်းဗဟိုအနီးမှာ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ၃၂ ပေအထိရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အောက်ဆုံးပုံမှာတော့ မိုးလေဝသဌာန ၆ ခုရဲ့ လမ်းကြောင်းတွက်ချက်ထားမှုအခြေအနေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ကြတဲ့ ဌာန ၆ ခုစလုံးက LUPIT ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်းခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
လာမဲ့ ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ LUPIT ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို စတင် တိုက်ခတ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း TSR ရဲ့ ၇၂ နာရီခန့်မှန်းဖေါ်ပြတဲ့ ပုံမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
mmweather မှ စူပါတိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်းကြီး LUPIT အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်လျှက်ရှိပြီး ရရှိတဲ့သတင်းများကို ဆက်လက်၍ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နံနက် 00 GMT (မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆နာရီ ၃ဝ) ထုတ်ပြန်သော TSR သတိပေးချက်
Storm Alert issued at 18 Oct, 2009 18:00 GMT
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များလေ့လာရန် (T2K)
Time/Date: 6:00 AM PST Mon October 19 2009
Location of Eye: 18.1 N Lat 134.3 E Lon
Distance 1: 1,190 km (643 nm) NE of Virac, Catanduanes
Distance 2: 1,290 km (695 nm) NE of Metro Naga/CWC
Distance 3: 1,315 km (710 nm) ENE of Casiguran, Aurora
Distance 4: 1,320 km (712 nm) ESE of Basco, Batanes
Distance 5: 1,330 km (718 nm) ESE of Aparri, Cagayan
Distance 6: 1,335 km (720 nm) ENE of Tuguegarao City
Distance 7: 1,460 km (790 nm) ENE of Metro Manila
MaxWinds (1-min avg): 250 kph (135 kts) near the Eye
Minimum Central Pressure: 919 millibars (hPa)
Recent Movement: NE @ 04 kph (02 kts)
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, super-typhoon, weather.2Comments »
2 Responses to “19OCT-စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT အခြေအနေ”
Also view updates on http://mmweather.ning.com/
INFORMATION LINKS by MMWEATHER
လတ်တလောရရှိသော ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သတင်းများ
Google Reader နှင့် NING-BLOG-POST သတင်းများ
MMWEATHER ၏ Google GROUP နှင့် WORDPRESS-BLOG-POST များ
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ အခြေအနေ update
19OCT-စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT update-2 »